I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Ga
"Chomnok couple" iyisitezi esizimele phezu kwendlu yami yamapulangwe.
Iqukethe ikamelo lokulala elilingana nendlovukazi elinendlu yokugezela kanye nethala lokuhlala. Ukubuka kwe-panoramic kuhle..!
**Izitebhisi ziphakeme kakhulu, ngakho izivakashi kufanele zicabangele umzimba wakho.
Isivakashi singasebenzisa indawo evamile ezitezi eziphansi, ekhishini, endaweni yokudlela, indlu yokugezela, iwasha elondolo kanye nohambo lwesibhakabhaka lwamapulangwe oluholela endlini yesihlahla.
Ungakwazi ukuhamba nge-kayak i-1 km. ukubona Izindlovu zigeza, futhi zigibele ibhayisikili ibanga elingu-5 kms. eDolobheni lasendulo.
Izindlu zezihlahla kanye neChomnok zihlala emanzini oMfula iLopburi. Ungakwazi ukuhamba nge-kayak i-1 km. ukubona Izindlovu zigeza, futhi zigibele ibhayisikili ibanga elingu-5 kms. eDolobheni lasendulo.
Kunezindlu zezihlahla ezimbili ezixhumene. Izindlu zezihlahla zihlala ngemuva naphakathi kwesihlahla esikhulu (Isihlahla semvula noma i-Saman noma i-Monkeypod kanye ne-Kan Lueang ก้านเหลือง )
Izindlu zezihlahla zinamakamelo okulala ama-2, igumbi lokuhlala, amagumbi okugezela ama-2 kanye namasimu.
Amakamelo okulala athi "U-Boon" igumbi likamatilasi elinesitezi eliphindwe kabili elinabantu abangu-2, "U-Naam" igumbi lokulala elilala abantu abangu-2.
Izindawo ezivamile yigumbi lokuhlala eliphansi elinesitebhisi esinethala lokudlela, i-hammock kanye nesihlalo soqalo esihlezi endaweni ephansi exhunywe ku-pier yokhuni.
Ibhuloho lamapulangwe elingena emanzini. Ukuhamba nge-kayaking, ukubhukuda, nokudlala emanzini kulula.
"IChomnok" yindlu enezitezi ezi-3, yakhiwa eminyakeni emi-3 ngemuva kwezindlu zezihlahla. Ihlala eduze kwezindlu zezihlahla, ixhuma nokuhamba kwesibhakabhaka. Kunegumbi lezivakashi esitezi esiphezulu elibizwa ngokuthi “Chomnok Couple”. Inamagumbi okulala amabili, ithala kanye negumbi lokugezela.
Esitezi sesibili kukhona ikhishi kanye negumbi lemibhede eyi-4 yezivakashi, ithala lenkonzo elinendlu yokugezela, usinki wokuwasha izitsha, umshini wokuwasha, imigqomo kadoti, ulayini wezingubo.
Ethafeni eliphansi lamapulangwe, indawo yokugcina amabhayisikili, amavesti okuphila nokunye.
Ngemuva kwezindlu zezivakashi kunengadi yami encane lapho ngitshala khona imifino yendawo.
Uhlangothi oluphambene nomgwaqo yingadi yami enkulu lapho ngitshala khona izithelo nezihlahla zehlathi.
-Eceleni kwasenyakatho kwendawo yami kunehhotela le-Thai lezinkanyezi ezi-4, amasimu elayisi kanye nezakhamuzi. -Phansi eningizimu yomfula ikhilomitha, kukhona "indlovu egezayo" engabonakali ekamu lezindlovu.
-Idolobhana elikhulu lamaSulumane kanye nomkhosi wabo osheshayo (Ramadan). Izivakashi zingazama izinhlobo ezahlukene zokudla.
-Ukuhamba ngebhayisikili amakhilomitha angu-5 ukuya edolobheni uzothola i-Great Archaeological of Ayutthaya, indawo ebanzi kakhulu yezigodlo eziyincithakalo, i-Wat, nokunye okuningi.
Ngihlala kwenye indlu eduze kwendawo yegaraji, ephambene ne "Chomnok". Ngihlala futhi ngisebenze isikhathi esiningi engadini noma ekhishini. Ngikuphekela ukudla kwaseThailand ukudla kwasekuseni kwakho.